ရွှေဖြူးလေး: ဘုရားပွင့်ဖို့ရန် "ကိုယ့်အသေ ကိုယ်ကြည့်"
“သူများ အသေ အသုဘကို မြင်ဘူးတွေ့ဖူးကြမည် ကိုယ့်အသေ အသုဘကို မြင်အောင်ကြည့်လော ရှု့လော့”
“ဝိပဿနာ အားထုတ်တာ တရားကျင့်နေတာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်အသေကိုယ် မြင်အောင်ကြည့်နေတာ”
“မိမိရဲ့ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကို ကိုယ်တိုင်ဖြတ်နိုင်မှ ဝေဒနာ နိယောဓာ တဏှာနိယောဓော တဏှာသေမည် တဏှာနိယောဓော နိဗ္ဗာန် ချမ်းသာရမည်”
သုံးပါး ဝေဒနာ အလှည့်ကျဖြင့် ငါတို့အသက်ရှင်နေစဉ်မှာ.
သုခဝေဒနာ ဖြစ်ပျက်မမြင် လောဘမသေ
ဒုက္ခဝေဒနာ ဖြစ်ပျက်မမြင် ဒေါသမသေ
ဥပေက္ခာဝေဒနာ ဖြစ်ပျက်မမြင် မောဟမသေ
သူတော်ကောင်းတို့၏ စကားသည် ဓမ္မမည်၍ ဓမ္မ၏ ပိုင်ရှင်သည် မြတ်စွာဘုရားရှင်ဖြစ်ပေ၏ ထို့ကြောင့် သူတော်ကောင်းစကားသည် ဘုရား၏စကား အဆုံးအမသာဖြစ်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရား၏ အဆုံးအမကို မိမိ၏ သန္တာန်ဝမ်းတွင်းသို့ ရောင်အောင်သွင်းနိုင်ခြင်းသည် မိမိ၏ ဝမ်းအတွင်း ဘုရားပွင့်ခြင်း၏ အကြောင်းမည်၏။ လောကတွင် ဘုရားပွင့်ခြင်းထက် မိမိ၏ဝမ်းတွင်း ဘုရားပွင့်မှသာလျင် နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို ရောက်တော့မည်ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် မိမိဝမ်းတွင်း ဘုရားပွင့်ဖို့ရန် ဘုရား၏အဆုံးအမ များကို ရှေ့သွားဖြစ်ဖို့ရန်လိုသည်။ မိမိ ဝမ်းတွင်း ဘုရားပွင့်ရန် နည်းလမ်းမှာ ဝိပဿနာမှတစ်ပါး အခြားမရှိပေ။ လောကတွင် ခန္ဓာရရှိထားသော သတ္တဝါမှန်သမျှသည် သုံးပါးဝေဒနာ အလှည့်ကျဖြင့် အသက်ရှင်နေကြခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ၁) သုခဝေဒနာ ၂) ဒုက္ခဝေဒနာ ၃) ဥပေက္ခာဝေဒနာ သုခဝေဒနာကို ဖြစ်ပျက်မမြင် သမျှ လောဘမသေ ဒုက္ခဝေဒနာကို ဖြစ်ပျက်မမြင်သမျှ ဒေါသမသေ ဥပေက္ခာဝေဒနာကို ဖြစ်ပျက်မမြင်သမျှ မောဟမသေ ဟု ရှေးရှေးဘုရား များလည်းမဟောကြားခဲ့ ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား ရှင်လည်း မဟောကြားခဲ့ပေ။ ထိုဝေဒနာ သုံးပါး မသေ သရွေ့ နိဗ္ဗာန်သည် လည်းမရနိုင်။
ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ !! လောကမှာ ကျွန်တော်တို့တွေသည် ဤဝေဒနာ သုံးပါးဖြင့်သာ အသက်ရှင်နေသည် ဆိုသည်မှာ ဉာဏ်နှင့်ကြည့်လျင် ကွက်ကွက် ကွင်းကွင်း မြင်နိုင်ပေသည်။ ကျန်းမာ ပျော်ရွှင် နေခိုက်တွင်မှာ အသက်ရှင်သည် သုခဖြင့်၊ မနာမကျန်း ဖြစ်နေစဉ်တွင် အသက်ရှင်သည် ဒုက္ခဖြင့်၊ ကျန်းမာ သယောင် မကျန်းမာသယောင် ရွှေတလှည့် ငွေတလှည့် ဖြစ်နေခိုက်မှာ အသက်ရှင်သည် ဥပေက္ခာဖြင့်၊ စားသောက်တိုင်း နေထိုင်တိုင်း သားရေး သမီးရေး စီးပွားရေး လုပ်နေတိုင်း ဤဝေဒနာသုံးပါး အား အခွန်ဆပ်နေရခြင်း ဖြစ်သည်။ ကောင်းကောင်း နေရသော အခါဝယ် သုခဝေဒနာကို အခွန်ဆပ်နေရပြီ။ ဆင်းရဲ ဒုက္ခကြုံတွေ့ရသောခါဝယ် ဒုက္ခဝေဒနာအား အခွန်ဆပ်ရပြီ။ ချမ်းသာသာ ဆင်းရဲရဲ ဖြစ်သလိုနေသော အခါဥပေက္ခာဝေဒနာအား အခွန်ဆပ်နေရပြီ။ တစ်ပါးဝေဒနာ ရှု့၍သည်ပင် နိဗ္ဗာန် မရနိုင်ပေ။ သုံးပါးဝေဒနာ ပေါ်လာကို ဖြစ်ပျက်ရှု့ သတ်မှသာလျင် ဝေဒနာ နိယောဓာ တဏှာနိယောဓော တဏှာသေခြင်းမည်၏။ တဏှာနိယောဓော နိဗ္ဗာန်ဖြစ်တော့ပေမည်။ ဝိပဿနာ ရှေ့သွားတင်၍ ဉာဏ်ဖြင့် လိုက်မှသာလျင် မဂ်ဉာဏ်ကို ရရှိပေမည် ဖြစ်ကြောင်း မိုးကုတ်ဆရာတော် ဘုရားကြီးမှ ကွက်ကွက် ကွင်းကွင်း မြင်အောင်ဟောကြားထားပေသည် ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ ။ ထို့အတူပင် ကနဦးတွင် ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်သော သူတော်ကောင်းစကားသည် ဘုရားအဆုံးအမ မည်၏ ဘုရားအဆုံးအမကို ရှေ့သွား မိမိဝမ်းတွင်းရောင်အောင် သွင်းမှသာလျင် ဘုရားပွင့်မည်ဖြစ်၏။ သူတော်ကောင်းစကား ကိုနာကြားယုံနှင့် မိမိ ဝမ်းတွင်း ဘုရားအဆုံးအမ မရောက်သေးပေ။ အဘယ်ကြောင့်နည်း မိမိသည် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပညာကို မသင်ကြားဘဲ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ဖို့ရန် လမ်းစမပေါ်သကဲ့သို့ ပညာသင်ကြားပြီး လက်တွေ့ လုပ်ငန်းခွင်တွင် အသုံးချမှသာလျင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဖြစ်ခြင်းမည်၏။ ထို့ကြောင့် သူတော်ကောင်း စကားနာကြားခြင်းသည် ဉာဏ်မျက်လုံး ပညာကိုရယူခြင်းမည်၏။ ထိုဉာဏ်မျက်လုံးဖြင့် မိမိတို့၏ ဝေဒနာကို အမြဲမပျက်ဖြစ်ပျက် ရှု့မှသာလျင် ဝိပဿနာ လုပ်ဆောင်နေခြင်းမည်၏။ လောကတွင် လူတိုင်းသည် ရသလောက်နှင့် မရောင့်ရဲနိုင် လိုချင်ဖြစ်ချင်နေတာ တွေချီဖြစ်၏ ထို့ကြောင့် ဝေဒနာသတိပဋ္ဌာန်ကို အသားပေးတင်ဆက် ရေးသားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့သို့ အမြဲမပြတ်ရှု့ပွားနိုင်မှသာလျင် ဝေဒနာ၏ ဖြစ်ပျက်ကို မြင် တနည်းဆိုသော် ကိုယ့်အသေကို ကိုယ်မြင်ခြင်း မည်၏ ဝေဒနာ၏ ဖြစ်ပျက်ကို မုန်း ဆိုသော ကိုယ့်အသေကို ကိုယ်မုန်းတီးရွံ့ရှာလာမည်။ ထိုအခါတွင် မိမိ၏ ဝမ်းတွင်း ဘုရားအဆုံးအမ ရောက်ခြင်းမည်၏။ ကိုယ့်အသေကိုကိုယ် မုန်းတီးလာပြီး ဖြစ်ပျက် ဆုံးသော ဤခန္ဓာ မလိုချင်မှု့ ဆိုသည့် မဂ်ဉာဏ် ဖြစ်လာမှသာလျင် မိမိ၏ ဝမ်းတွင်း ဘုရားပွင့်ခြင်းမည်ပြီ။ ထိုအခါ ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်း မြတ်နိဗ္ဗာန်ကို ပိုင်ဆိုင်ရောက်ရှိပြီး ခန္ဓာတို့၏ သွားရာ အပါယ်၊ ဝေဒနာတို့၏ အခွန်ဆပ်သခြင်းမှ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာ အေးမြရွှေပြည် မြတ်နိဗ္ဗာန်သို့ ရရှိပြီဟု မိုးကုတ်ဆရာတော် ဘုရားကြီး မှ အရိယာ မျက်လုံးတပ်ဆင်ပေး လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ဆရာတော်ကြီး၏ တရားတော်မှ မိမိဉာဏ်မှီသလောက် ရေးသားမျှဝေပြီး ကျွန်တော်နှင့်တကွ အားလုံးသော ဝေနေယျ သတ္တဝါ အပေါင်းတို့ ဝိပဿနာ အားထုတ်ခြင်းဖြင့် ကိုယ့်အသေကိုယ် မြင်၊ ကိုယ့်အသေကိုယ်မုန်း၊ ကိုယ့်အသေ ကိုယ်မလို ချင်တဲ့ သူများအဖြစ် မိမိတို့၏ ဝမ်းတွင်းမှာ ဘုရားပွင့်၍ ကိုယ့်ကိစ္စ ကိုယ်အဆုံးသတ်နိုင် ပြီး မြတ်နိဗ္ဗာန်သို့ သွားရောက်နိုင်အောင် ကျင့်ကြံအားထုတ် နိုင်ကြပါစေလို့.......ဆန္ဒပြုလျက်...
ဓမ္မစေတမန်၏ စာပေကို ပြန်လည်မျှဝေပါသည် ။
Posted by အရှင်သုမနသာရ(ဖြူး) at 7:21 PM